Uyilo lwamahashe kunye nezona ntlobo zimeleyo | Amahashe eNoti
Uyilo lwamahashe zezo isetyenziselwe umsebenzi ngenxa yokutsala kwayo okukhulu. Ngokwesiko bezisetyenziselwa umsebenzi wezolimo, njengamandla okuqhuba kunye namahashe ayilwayo kwizihlandlo ezithile ezifuna ukuhambisa oomatshini.
Ihashe eliyidrafti, ifuna ukhathalelo oluthe kratya kunye nokondla ngokuxhomekeke kuhlobo kunye nenani lomsebenzi ukuba bayayenza ngemihla yabo.
Uninzi zohlobo lwehashe olusayilwayo zazingekho ngaphambi kwenkulungwane ye-XNUMX. Kwakususela kule nkulungwane ukuba iimfuno zomkhosi nezolimo ezazichaza ubuhlanga umsebenzi onzima. Ukongeza kwimpembelelo yohlaziyo lweshishini, ukuphuculwa kweekhareji kunye noomatshini bezolimo.
Abo Amazwe awayeneendlela zorhwebo afumene ezi zinto zintsha zinamandla ziluncedo kakhulu. Nkqu nezo ndawo zinemijelo bayisebenzisela ukuhambisa amandla emanzini besebenzisa iintambo zocingo kunye nezixhobo zoomatshini.
E-Spain kwakungekho mahashe anzima ukuya kwinkulungwane ye-XNUMX.
1 Iindidi zamahashe ayidrafti
1.1 Ihashe elinzima
1.2 Amahashe ayidrafti enzima
1.3 Ukukhanya kuyilo lwamahashe
2 Ukusetyenziswa kwemveli kwamahashe ayilwayo
2.2 Ukuhanjiswa kwempahla nabantu
2.3 Towela amahashe
2.4 Ukuqhuba komatshini
2.5 Umsebenzi wezamahlathi
3 Iintlobo eziphambili zamahashe ayilwayo
3.1 Iimpawu eziqhelekileyo yoyilo lwamahashe
3.2 Amahashe aseArdenes
3.3 Uyilo lweAmerican Cream
3.4 Ihashe lase-Italiya eliyilwayo
3.6 Ihashe lokuloba laseBelgium
3.7 I-Suffolk Punch
3.9 Ihashe laseBreton
Iindidi zamahashe ayidrafti
Singafumana Iindidi ezintathu zedrafti yehashe ngokweempawu kunye nokusetyenziswa, Zombini zinxulumene ngokwasemzimbeni: amahashe ayidrafti anzima, amahashe ayidrafti esindayo kunye namahashe alula.
Ngawona mahashe makhulu inobunzima obuyi-180 cm ekubuneni. Zikhulu nazo, zifikelela kubunzima obungama-600kg ukuya ngaphezulu kwe-1000 kg. Babo Imilenze imifutshane kwaye amathambo ayo omelele nge-musculature ephuhliswe kakuhle. Ukongeza, bahlala benomoya ozolileyo.
Ezinye zeedrafti ezinzima zezi: idrafti yokhrimu yaseMelika, ihashe laseArdennes, ihashe laseBelgian, ihashe laseBreton, iPercheron, ihashe laseShire, ihashe laseBolognese okanye ihashe laseCatalan Pyrenean
Amahashe ayidrafti enzima
Amahashe ayilwayo awayesetyenziswa kwezothutho ezinje ngeeqakishi zesteki nawo afuna amandla akhawulezileyo. Kungenxa yesi sizathu le nto ihashe elinzima lokuyila lalingakulungelanga kwaphela ukwenza le misebenzi yesantya esiphezulu. Amahashe asindayo anzima zizilwanyana ezikhaphukhaphu ezinokuqhubela phambili kwindawo ekuhlalwa kuyo.
Ezinye zeedrafti ezinobunzima obunzima ziludidi olulula lwePercheron kunye nokukhanya okulula kweBreton, ekwabizwa ngokuba yiBreton Postire, amahashe eArdenes.
Ukukhanya kuyilo lwamahashe
Lawa ngamahashe alula kakhulu phakathi kwamahashe aqeshiweyo. Baqhele ukwenza imisebenzi enje nge Ukutsala iinqwelo ezikhanyayo ngesantya esiphezulu kunezimbini zangaphambili.
Sifumana kolu luhlu iintlobo ezinje: UMorgan okanye uHackney.
Ukusetyenziswa kwemveli kwamahashe ayilwayo
Amahashe anzima ayesetyenziselwa ukulima kunye nokuhambisa oomatshini bezolimo bazo zonke iintlobo de amahashe noondlebende bathatyathelwa indawo yinkqubela phambili yetekhnoloji.
Ukuhanjiswa kwempahla nabantu
Kuyaziwa ukuba ngamaxesha ahlukeneyo iimpahla zazithuthwa ngeenqwelo ezirhuqwa ngamahashe. Ezi zithuthi zinokuba zezobume obahlukeneyo kunye nobukhulu, ngokokutsho kwazo, zazinegama elinye okanye elinye: inqwelo, inqwelo, itartata, igali.
Unokwazi iintlobo ezahlukeneyo zeenqwelo ezitsalwe ngamahashe kwinqaku lethu: Iinqwelo zamahashe: imbali, iintlobo kunye nokusetyenziswa
Njengamagqabantshintshi siza kukhankanya ezimbini, enye kukusetyenziswa kwayo kakhulu kwaye okwesibini kukufuna ukwazi:
Ixesha elide iintshukumo phakathi kweedolophu okanye iidolophu zenziwa ngehashe. Iindlela, ezazingqinelana nezo zazakhiwe ngamaRoma, zazimbi okanye zazingekho. Ukusetyenziswa kwenqwelwana esasazekayo kunye neendlela zakhiwa phakathi kweedolophu eziphambili, ukuseka imigca yeebhasi zabahambi phakathi kwezixeko eziphambili. Yayingamahashe ayilwayo awazalisekisa umsebenzi wokukhokelela kwezi nkqubo.
EParis bekukho uthungelwano lweetramu ezitsalwe zii-equines.
Njengoko besesitshilo ngaphambilana, ezo zixeko zazithuthwa yimilambo, amahashe adlala indima ebalulekileyo. Izilwanyana zatsala iimpahla ngeentambo endaweni yabantu okanye iimeyile ezazidla ngokutsala ezi mpahla de kubonakale amahashe ayilwayo.
Uyilo lwamahashe lukwasetyenziswa njengamandla okuqhuba koomatshini okanye izixhobo ezinje nge looms, amatye okusila, oomatshini bokushicilela, iimpompo zamanzi, njl. Izilwanyana zihlala ziqhotyoshelwe kwi-winch ye-axis ethe nkqo kumgca weentsimbi ezilungelelaniswe kakuhle. Amahashe acwangciswa ukuba ahambe ngesangqa ngamandla ayimfuneko ukufikelela kumandla afunekayo ekusebenzeni koomatshini.
Kwindawo enzima, ngamahashe aqeshiweyo atsala ukutsala iinkuni.
Iintlobo eziphambili zamahashe ayilwayo
Ngoku siza kubona ezinye zeentlanga eziphambili kwiidrafti zamahashe. Kodwa kuqala siza kuthetha malunga neempawu eziqhelekileyo ezinamahashe ayilwayo.
Iimpawu eziqhelekileyo yoyilo lwamahashe
Iidrafti zamahashe ziyaziwa amandla amakhulu kunye nonyamezelo. Zikhulu, zide, zinee-equine ezinkulu, nangona sele sithethile, kuxhomekeke kuhlobo lwehashe eliyidrafti elinalo uhlobo, iya kuba nkulu okanye incinci. Ziyahluka ukusuka kwi-160 cm ukuya kwi-180 cm xa zibuna kwaye ziphakathi kwama-600 kunye ne-1000 kg, nangona ezo ziyilwayo enzima zingadlula ubunzima bokugqibela.
Amathambo ala mahashe omelele kwaye makhulu. Umzimba wakhe ophuculweyo. Iprofayile yentloko ihlala i-convex kunye nemigca emifutshane, kunye neziphelo kunokuba zimfutshane.
Iidyasi zinokwahluka kakhulu kuxhomekeke kudidi ekuthethwa ngalo, nangona zihlala zinengubo eshinyeneyo. Ezinye iintlobo, ezinjengeePercherons, zineempuphu ezigqunywe ziinwele.
Ngokubhekisele kubuntu bakhe, imalunga izilwanyana ezizolileyo.
Kwaye ngoku ewe, siza kuthetha ngeendlela ezine zala ma-equines.
Singaphambili Olunye lweendidi ezindala zamahashe aqeshiweyo. Olu luhlobo lukhuliswe eArdennes, eBelgium, eLuxenburg naseFrance, eyokuqala kulapho ifumana khona igama layo. Nangona kunjalo, imbali yezi zinto zilingana ibuyela umva kwi ngakumbi emva kwimbali, ukuya kwiRoma yamandulo. Amahashe aseArdennes okanye eArdennes ngookhokho bezinye iintlobo zedrafti.
Ekuqalekeni kwabo babedwelisa amahashe endaweni yodidi olunzima, kodwa ngenkulungwane ye-XNUMX, uhlobo lwaluxutywe namahashe aseArabhiya ukuyenza lula. Namhlanje ithathwa njenge ihashe eliyidrafti enzima.
Ngaba Kubaluleke kakhulu ukwenza umsebenzi emfazweni, zombini njengehashe eliyidrafti nanjengabamahashe abakhweleyo.
Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga nolu hlobo ungafumana ulwazi kwinqaku lethu: Amahashe aseArdennes, yenye yezona zinto zindala ziyiliweyo
Uyilo lweAmerican Cream
Olu luhlobo lwehashe kuphela kwehashe eliyidrafti eliphuhliswe eUnited States namhlanje. Ifumana igama layo kwisithsaba sayo sokhilimu okanye i-champagne cape kunye namehlo ayo e-amber.
Luhlobo olunemizekelo embalwa kakhulu nangona umsebenzi usenziwa ukuze ungalahleki.
Ihashe lase-Italiya eliyilwayo
Es Olunye uhlobo oluncinci olusayilwayo, ubukhulu becala banokufikelela kwi-160 cm. Ukongeza ekomeleleni, luhlobo olusebenzayo olusetyenziswa njengehashe lasefama. Ine-pompadour kunye nomsila we-blonde.
Kolu gqatso lonyamezelo olukhulu, Sifumana ezi ntlobo zintathu zamahashe ayilwayo: umsebenzi onzima womsebenzi waseLatvia, umsebenzi osisindo-onzima waseLatvia kunye nokukhanya okukhwela eLatvia.
Ihashe lokuloba laseBelgium
Imvelaphi yaseBelgium, yenye yeendlela eziyiliweyo ebezikho Isetyenziswa ngokubanzi eMelika naseKhanada. Yayisetyenziselwa ukuhambisa imithwalo emikhulu.
Olu luhlobo luvela kwisithili esinegama elifanayo. Ifunyenwe ngokukhetha iintlobo zemveli kuloo ndawo. Luhlobo lwexesha elide olufuna ukutya okuncinci ukuze luphile. Namhlanje azikho iikopi ezininzi kakhulu.
Lo Uhlobo oluvela eLe Perche, eFrance, ayaziwa kuphela nge amandla amakhulu kunye nengqibelelo kodwa ngenxa yeempawu zayo zobuhle ezixabisekileyo kangangokuba zibeka kuluhlu oluninzi lwee amahashe amahle kakhulu emhlabeni.
Kancinci kancinci, olu hlobo lwalusasazeka kwaye lwamkela iindidi ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwilizwe eliqhubeka nokukhula kulo. Ukuba ufuna ukwazi iintlobo ezahlukeneyo zolu hlobo, sicebisa ukuba ujonge inqaku lethu: IPerheron ihashe
Sijongene nelinye ihashe eliyidrafti elivela eFrance. Luhlobo oluphuhliswe kwindawo ye- XIX kwinkulungwane kwaye ngubani ophethe i ubukrelekrele obukhulu. Igama layo livela kwiintaba zeBreton, apho yayikhona kakhulu.
Luhlobo lwe-rustic, ehamba ngokukhawuleza kunye ne-trot enomdla nangona ubukhulu bayo bukhulu.
Olu hlobo lwamahashe ayidrafti sisiphumo se- ukuwela i-Scottish mares esindayo kunye namahashe e-Flemish. Yaphuculwa ngokuwela neShire kunye neeArabhu. Konke oku kwenza ukuba olu hlobo luzuke ngakumbi.
Ngeempawu zamahashe aseArabia naseBerber, olu luhlobo lobukhulu obukhulu kunye nobunzima (malunga ne-850 kg). Luhlobo esetyenziswa ngokubanzi kwimisebenzi yokudonsa kancinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amahashe kaNoti » Amahashe » Idrafti yamahashe kunye nezona ntlobo zimeleyo